Mica Kukumbira muPendi uye Kubata maindasitiri | Lingshou
Mica Chikumbiro muPendi uye Kubatana maindasitiri
(1) Mhinganidzo Yacho
Mune firimu rekupenda, firimu risinganyatsogadzika richaita gadziriro yakafanana, nekudaro kudzivirira kupinda kwemvura nezvimwe zvinhu zvinoshatisa, uye kana uchishandisa yakakwira mica poda (dhayamita-dhindaundi zviyero zvinoita kanosvika makumi mashanu, pamwe 70 times), izvi mhando yenguva yekupinda inowanzo kuwedzerwa ne3 times. Sezvo iyo mica filler iri yakachipa kwazvo kupfuura iyo yakasarudzika resin, ine yakakwira kwazvo tekinoroji uye hupfumi kukosha.
Muchidimbu, kushandisa yakakwirira-mica poda inzira yakakosha yekuvandudza kunaka uye kuita kweanti-corrosion uye ekunze ekunze ejira. Munguva yekubika maitiro, iyo firimu yependi isati yasimbiswa, mica machipi anovata pasi peiyo tension uye ipapo otomatiki inoumbwa parutivi kune mumwe uye kune mafirimu ependi. Iko kutaridzika kwerudzi urwu rwekufananirana kurongeka kwakaringana kune izvo zvezvinhu zvinokanganisa 'zvinopinda pende firimu, nokudaro ichiridza mhedzisiro yayo kunonyanya. Dambudziko nderekuti rakasarudzika mica chimiro chinofanira kunge chakakwana, sezvo vekunze maindasitiri emabhizinesi akaisa chiyero chekuti hupamhi-gohwo huwandu hunofanirwa kunge huri makumi mashanu nguva, zvichikosha kanopfuura makumi manomwe, zvikasadaro mhedzisiro yacho haizodiwe, nekuti iyo inotetepa chip iri, yakakura nzvimbo inoshanda yekuvhara neyunivhesiti yeiyo filler, pane kudaro, kana chip iri yakanyanya, saka haigoni kuumba mizhinji midziyo yemidziyo. Ndicho chikonzero granule filler ingori isina rudzi urwu rwebasa. Zvakare, perforation uye avulsion pane mica chip ichakanganisa zvakanyanya iyi chikamu chekuvhara (zvinhu zvinokuvadza zvinogona kuburukira zviri nyore). Iyo nhete iyo mica chip iri, iyo yakakura nzvimbo yekuvhiringidza neiyo unit vhoriyamu yeiyo filler. Mhedzisiro iri nani ichaitwa nehuremu hukuru (yakanyanya kuonda haisi kugara yakanaka).
(2) Kuvandudza Zvemukati uye ZveMuchina Nzvimbo dzeFirimu
Kushandisa yakanyoro pasi mica poda kunogona kuvandudza akatevedzana yemuviri uye michina zvinhu zvependi pendi. Chinhu chakakosha ndeye morphological hunhu hwevanyori, kureva, hupamhi-hwehupamhi huremu hweanokanganisa filler uye kureba-dhayamita ratio ye fibrous filler. Granular filler inoita seshandi uye mabwe mukongiri yekrete kusimudzira simbi.
(3) Kuvandudza Iyo Anti-Pfeka Pfuma yeiyo Firimu
Iko kuoma kwehini pachayo kune mashoma, uye kusimba kwemhando dzakawanda dzefiller haina kukwirira (semuenzaniso, talcum poda). Pane kupesana, mica, imwe yezvinhu zvakagadzirwa granite, yakakura maererano nehuremu hwayo uye simba remuchina. Naizvozvo, kuwedzera mica semu filler, iyo inorwisa-kupfeka yekuita yejasi inogona kuve yakanyanya kuvandudzwa. Ndicho chikonzero mica poda inonyanya kushandiswa kuve pendi yemotokari, pendi yemugwagwa, machira ekurwisa-corrosion machira uye machira ejira.
Mica, ine huwandu hwakanyanya hwekudzivirira kwemagetsi (1012-15 ohm · cm), iri pachayo chinhu chakanakisa chinyorwa uye iri tekinoroji inozivikanwa pachena kuti ishandise kugadzirisa imba yekuisa yepirimu firimu. Chii chinonakidza ndechekuti kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchigadzira pamwe neyakaumbwa yeiyo organic silicon resin uye organic silicon uye boric resin, ivo vanozoshandura kuva rudzi rwe ceramic chinhu chine yakanaka mehendi simba uye inovaka midziyo kana isangana nekupisa kwakanyanya. Naizvozvo, waya uye tambo yakagadzirwa neiyi mhando yeinosimbisa zvinhu inogona kuramba ichichengetedza imba yayo yekuvharidzira kunyange mushure memoto, iyo yakakosha kumigodhi, matauro, zvivakwa zvakakosha uye zvivakwa, nezvimwe.
Mica pfumbu imhando yakakosha kwazvo-inodzoreredza mafirita uye inogona kushandiswa kugadzira moto-unodzoreredza uye moto usingadzoreki pendi kana ikaiswa neanogic halogen murwi unodzoreredza.
(6) Anti-UV uye infrared Rays
Mica yakanaka kwazvo pakudzivirira Ultraviolet uye infrared rays, nezvimwe. Saka kuwedzera yakanyorova pasi mica poda mupendero wekunze kunogona kuwedzera zvakanyanya muvhi kupesana ne-Ultraviolet kuita uye kuderedza kukwegura kwayo. Nekuita kwayo yekudzivirira infrared rays, mica inoshandiswa mukugadzira kupisa kupisa uye zvinodziya zvekuisa zvinhu (senge pendi).
(7) Kuderedza Kugadzikana
Kumiswa kwekuita kweye wet pasi mica kwakanyanya kunaka. Iwo matete akatetepa uye madiki anogona kumisa zvachose mune imwe nzvimbo isina hierarchical sedimentation. Naizvozvo, kana uchishandisa mica poda svinafa pane iyo inonyura zvishoma, kugadzikana kwekuchengetera kwecheka kunowedzera zvakanyanya.
(8) Kupisa Radiation uye Kwakakwirira-Tembiricha Coatings
Mica ine kugona kukuru kwemagetsi anopenya infrared rays. Semuenzaniso, kana uchishanda nesimbi oxide, nezvimwewo, inogona kugadzira yakanakisa radiation radiation mhedzisiro. Muenzaniso unowanzoshandiswa ndewekushandisa muzvipfeko zvejacketi (kudzikisa tembiricha yezuva nezuva nemakumi emadhigiri). Yakawanda pendi yekushongedza kwechinhu chekudziya uye nzvimbo yepamusoro yekudziya vese vanofanirwa kushandisa iyo yakakosha pendi ine mica poda, nekuti zvipfeko zvakadaro zvinogona kuramba zvichishanda pasi pekupisa kwakanyanya, senge 1000 ℃. Panguva iyoyo simbi ichaita tsvuku-inopisa, asi pendi inoramba isina kukuvadzwa.
(9) Kubata Mhedzisiro
Mica ine yakanaka pelescent gloss, saka, kana uchishandisa yakakura-size uye yakaonda-mapepa mica zvigadzirwa, zvigadzirwa, senge pendi uye hembe, dzinogona kupenya, kupenya kana kuratidza. Pane kusapindirana, super-yakanaka mica poda inogona kuita yakadzokorora uye kutaridzika kutaridzika mukati mezvishandiso, nokudaro ichigadzira inonyengera inoshanda.
(10) Inonzwika uye Vibration Damping Migumisiro
Mica inogona kushandura zvakanyanya kutevedzana kwemuviri modulus yezvinhu pamwe chete nefomu kana kushandura kuoneka kwayo. Zvigadzirwa zvakadaro zvinogona kunyatsobata vibration simba pamwe nekushaya simba rekushamisika uye nemafungu eizwi. Uye zvakare, mafungu ekushamisika nemafungu eizwi anozogadzira anodzokorora kuratidzika pakati pe mica chips, izvo zvinoguma nekushaya simba simba. Naizvozvo, rakanyorovera pasi mica rinoshandiswawo kugadzirira zvinonzwika uye vibration damping zvinhu.
Nguva yekutumira: Jun-23-2020